← Исус Иса Dinqiisiisaa
Waaqayyo обичайното isaa biyya garbumma keessa неза Hip не поставяйте. Ammas Не чакайте. Saba ISA ISA waliin ta'un изглежда Kind. Ammas преразгледано в. Saba isaa irra immo amanamumma barbada. Sabni isa amaname Waaqayyoof akka hojjetu—akka waaqesu.
MAREE: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maal fakkataa? Gegg Essa Fi garummma вътре SIIF godhe kanaf кан SII Irra eegamuu Watermaal Jetta?
МИЕ ITTI YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e Waaqayyo isa ina hinaafaa ta’u isa sirritti mee itti yaadii.
19 Jyaasuunis sabaan, “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, inni Waaqayyo isa qulqulluu dha, inni Waaqayyo hinaafaa dhas; inni irra-daddarbaa keessanii fi eubbuu keessan isiniif hin dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii waaqayyolii ormaatiif yoo hojjettan, inni isa dun gaaril isiniif godhe, Поддържане immoo deebi'ee Wanta Аман isinitti fidee ISIN в фиксир "jedhe. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, “Lakkii! Nuyi Waaqayyoof в hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "Исин-Waaqayyoof в hojjenna-ISA jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa в baatu" jedhe; isnanis, “Eyyeel Nuyi dhugaa in baana!"Jedhanii в deebisanilf. 23Chicken imratti lyaasuun jaraan, “Egaa amma waaqayyolii ormaa warn isin gidduu jiran sana imnaa deebi’aa!Рейтинг keessanis натъпкани Waaqayyo самите gooftaa този Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, “Waaqayyo gooftaa keenyaaf in hojjenna, isaafis in abboomanma” jedhan.
(В. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun maal jechuu dha? Аmanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
Murtoo Iyyasuu fi murtoo saba (на. 23 е 24) mee xinxalii. Maal irra barata?
Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha miti. Gaatii namaa basisaa—Seera Ba’uu 20:5 е 34:14 mee qoradhuu.
Namni ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta’e dhabachuu fi simatamu argata. Jireenya Waaqayyo araraa решаване Ирра щедър ka'ee namaa badhase IMMO namni на sodaa Sun ви amanamamumman keessa jirachuutu Ирра eegama.
Jireenyi akkasi ви dubbi layyo utuu ин НЛП dubbi ИТТИ cichuu месо gaafatu DHA. Waan nama tokko gammachiisuuf jedhani akka qosatti itti galan ykn eegalan ta’u hin qabu. Murtoo ciima nama gaafata. Waaqayyo inni Waaqayyo araara ta'e хиляди Waaqayyo примирени Waaqayyo hinaafaa прах. Waaqayyo cubbu не eenya waliin Fi ин на зрялост.
Tamirat Teshome Dekebo на Юни 25, 2017 в 10:57 в каза:
Ararso Korsa на Април 11, 2017 в 4:57 PM каза:
Misganu Gadisa на Март 23, 2015 в 10:00 в каза: